अवैध रूपमा युएई बस्ने नेपालीले... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
अवैध रूपमा युएई बस्ने नेपालीले यसरी सदुपयोग गर्न सक्छन् ‘आममाफी’
सेतोपाटी संवाददाता युएई, साउन २०
युएई सरकारले आफ्नो मुलुकमा गैरकानूनी हैसियतमा रहेका विदेशी नागरिकलाई वैध रुपमा युएईमा काम गर्न दिने तथा स्वदेश फर्कन चाहनेका लागि तीन महिने आममाफीको व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्था साउन १६ देखि लागू भएर आगामी कात्तिक १४ गतेसम्म कायम रहनेछ।
प्रवेशाज्ञाको अवधि सकिएर म्यादभन्दा बढी बसेका र कम्पनी छाडेर भागेका व्यक्तिहरु आममाफीसम्बन्धी व्यवस्थाबाट लाभान्वित हुन सक्ने दूतावासले जनाएको छ। आममाफी व्यवस्थाअनुसार युएइको अध्यागमनको नियमानुसार लाग्ने जरिवाना तथा शुल्कसमेत मिनाहा हुने र भविश्यमा युएई आउँदा हुने सम्भावित प्रतिबन्धबाट समेत छुटकारा पाइने छ ।
साथै वैधरुपमै युएईमै बस्न चाहनेले काम खोज्न युएई सरकारले तोकेको ५०० दिराम (करीब रु १५ हजार) शुल्क तिरी छ महिनाका लागि अस्थायी प्रवेशाज्ञा प्राप्त गर्न सक्ने दूतावासले जनाएको छ । नेपाल फर्कन चाहने राहदानी नभएका नेपालीलाई दूतावासले ट्राभल डकुमेन्ट बनाउन सहयोग गर्नेछ ।त्यस्तै युएईमै काम खोजेर बस्न चाहनेका लागि राहदानी आवेदन गर्न नेपाली नागरिकता, पुरानो राहदानीको प्रतिलिपि वा प्रहरी प्रतिवेदनसहित सम्पर्क गर्न पनि दूतावासले आग्रह गरेको छ ।
कसरी मौका सदुपयोग गर्ने?
अगष्ट ०१ देखि ३१ अक्टोवर, २०१८ सम्म लागूहुने यूएइको Federal Authority for Identity and Citizenship (ICA) को “Protect Yourself By Modifying Your Status ” कार्यक्रम अन्तर्गत अवैधानिक बनेका आप्रवासीहरुलाई वैध रुपमा यूएईमा रहन तथा स्वदेश फर्कन पाउने व्यवस्था भएकोले यूएईमा गैर-कानुनी रुपमा रहनुभएका नेपालीहरुलाई यस अवसरको सक्दो उपयोग गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
प्रश्न नं १: आममाफि कसले पाउने ?
उत्तर: भिषाको अवधि सकिएर म्याद भन्दा बढी बसेका (Overstay) र कम्पनी छोडेर भागेका (Absconding) ब्यक्तिहरू यस आममाफीबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन् ।
प्रश्न नं २: यो आममाफीबाट के फाइदा लिन सकिन्छ ?
उत्तर: यस व्यवस्था अन्तर्गत युएइको अध्यागमनको नियमानुसार लाग्ने जरिवाना तथा शुल्क समेत मिनाहा हुनेछ। भविष्यमा युएइमा आउनको लागि हुने संभावित प्रतिवन्ध वाट समेत छूटकारा पाइने छ । साथै, युएईमै बस्न चाहनेहरूले काम खोज्नको लागि युएई सरकारले तोकेको ५०० दिरहाम शुल्क तिरी ६ महिनाको अस्थायी भिषा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
प्रश्न नं ३: यो आममफिवाट युएइ मै काम खोजी वस्न चाहनेहरूको लागि के के कागजात आवश्यक हुन्छ?
उत्तर: वैध रुपमा काम गरी बस्नको लागि अवधी बाँकी रहेको राहदानी (Valid MRP) आवश्यक हुन्छ ।
प्रश्न नं ४: राहदानी नभएमा के गर्ने ?
उत्तर: राहदानी नभएमा यदी नेपाल फर्कने हो भने Travel Document बनाउन र यूएई मै काम खोजेर बस्न चाहने हो भने राहदानीको लागि आवेदन गर्न नेपाली नागरिकता, पुरानो राहदानीको प्रतिलिपि र Police Report लिएर दुतावासमा आउनु पर्ने छ ।
प्रश्न नं ५: आममाफीको लागि कहाँ कहाँ सम्पर्क गर्ने ?
उत्तर: यसको लागि पछिल्लो भिसा जुन इमिरेट्सवाट जारी भएको छ त्यही इमिरेट्समा रहेको Amnesty Service Centre मा सम्पर्क राख्नु पर्ने हुन्छ ।
नोटः ६ महिनाको Job Seekers भिसा (अस्थायी भिसा ) सकिनै लाग्दा समेत काम नपाइएमा उक्त भिसाको अवधि सकिन १० दिन अगावै नेपाल फर्कनु पर्ने हुन्छ ।
अन्य जानकारीको लागि Federal Authority of Identity and Citizenship को Toll Free Hotline 80080 वा दूतावासको फोन नं 026344767 मा सम्पर्क गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।
प्रकाशित मिति: आईतबार, साउन २०, २०७५, १४:०४:००